KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Maleeshiyaadka Kooxda Shabaabka Oo La wareegay Diif - Warbixinta Keydmedia
Tuesday 20 March 2012 11:38
Maleeshiyaadka Kooxda Shabaabka Oo La wareegay Diif - Warbixinta Keydmedia
Kismaayo (Keydmedia) - Maleeshiyaad ka tirsan kooxda nabad diidka ah ee Shabaabka ayaa saaka la wareegay gacan ku haynta deegaanka Diif ee gobbolka Jubbada Hoose halkaasoo ay horay ugu arriminayeen Ciidamada dagaal-ooge Maxamed Cabdi Gaandi.
Wax dagaal ah kama dhicin deegaanka Diif waxaana Maleeshiyaadka Shabaabka ay si nabad galya ah kula wareegeen magaalada.
Ciidamada Gaandi ee deegaanka Diif ku suggnaa ayaa isaga cararay deegaanka iyagoo aan wax xabad ah ridin arrintaasoo ay dad badan aad ula yaabanyihiin.
Hadda waxaa ay ciidamada Gaandi ay ku sugganyihiin duleedka deegaanka Diif halkaasoo ay isku aruursanayaan waxaana ay doonayaan inay markale weerar ku soo qaadaan deegaanka Diif.
Goobjoogayaal ku suggan deegaanka Diif ayaa warbaahinta Keydmedia sheegay in Maleeshiyaadka kooxda Shabaabka ee saaka qabsaday deegaanka Diif ay difaacyo badan ka sameysteen gudaha deegaanka iyagoona isku fidiyay guud ahaanba magaalada.
Xaalada ayaa ah mid wali kacsan waxaana ciidamadii Gaandi ee Diif laga qabsaday ay isku aruursanayaan duleedka deegaanka Diif.
Nin Ciidamada Gaandi ka tirsan oo aan la hadalanay waxaa uu sheegay in sababta ay deegaannka Diif ciidamadooda ugu soo baxeen ay tahay xeelad dagaal, isagoona sheegay in saacadaha soo socda ay dib ula wareegi doonaan gacan ku haynta deegaanka Diif.
Dagaalyahanada Al shabaab oo fariisimo ku leh dhulka howdka ah ee u dhaxeeya Diif iyo Ceelwaaq ayaa inta badan waxaa ay weeraro ku soo qaadaan deegaanka Diib iyagoona kadibna isaga baxaan.
Si kastaba dad badan ayaa aaminsan in qabsashada Al shabaab ee deegaanka Diif aanay wax badan soo kordhinayn maadaama la ogyahay in ay isaga bixi doonaan sidii horayba usoo dhacday